Pokémon: The Movie 2000 – MMANIME
Ikue Otani, Inuko Inuyama, Masami Toyoshima, Mayumi Iizuka, Megumi Hayashibara, Rica Matsumoto, Satomi Kourogi, Shin-ichiro Miki, Tomokazu Seki, Unsho Ishizuka
Pokémon The Movie 2000 : The Power of One
Another Name : Pocket Monster The Movie : The Phantom Pokémon : Lugia’s Explosive Birth
Release Date : July 17, 1999 (JST), July 21, 2000 (US)
Encoder :A Nge Lay
Pokémon Master ဖြစ်ဖို့ ကြိုစားနေတဲ့ Ash Ketchum နဲ့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Misty နဲ့ Tracey တို့ဟာ ပင်လယ်အတွင်းမှာ မုန်းတိုင်း တစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်မှာ Orange Island ကျွန်းစု ရဲ့ အလယ်မှာ တည်ရှိတဲ့ Shamouti Island ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် …
အဲ့ဒီ့ အချိန်မှာပဲ Legendaries Bird ၃ကောင်ထဲက Fire Type ကိုယ်စားပြု Pokémon ဖြစ်တဲ့ Moltres ဟာ Lawrence lll လို့ ခေါ်တဲ့ Collector တစ်ယောက်ရဲ့ ဖမ်းဆီး ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ် …
ဒါပေမယ့် သူ ဖမ်းဆီး လိုက်တဲ့ Pokémon က ကမ္ဘာ ကြီးနဲ့ ဘယ်လို ပတ်သတ် နေမလဲ ? Lawrence lll ကရော ဘယ်လို လူမျိုးလဲ ? Ash တို့ အနေနဲ့ရော ဘယ်လို အန္တရာယ် တွေနဲ့ ကြုံရမလဲဆိုတာ ဆက်ပြောနေရင် Spoil သလိုဖြစ်မှာ စိုးတာကြောင့် ကိုယ်တိုင်သာ down ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာ
ဒီကားဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မစိမ်းတဲ့ ကားတစ်ကားပါ …
ငယ်ငယ် မှာ အခွေဆိုင်မှာ အခွေဝယ်ပြီး Eng Dub နဲ့ ကြည့်ခဲ့ရစဉ်ရလဲ တော်တော်လေး သဘောကျ နှစ်ခြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါ …
Pokémon Fan တိုင်း နီးပါး သဘော ကျ ကြတဲ့ Moltres, Zapdos, Articuno နဲ့ “Beast of the Sea” လို့ သိကြပြီး ငှက်၃ကောင်ရဲ့ Babysitter ဖြစ်တဲ့ Lugia ကြီးတို့ ဒီ Movie ထဲမှာ ပွဲကြမ်းကြပုံကို Emotion မျိုးစုံနဲ့ ခံစားကြည့်ရှူ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
ဒီကားကို စတင်ရိုက်ကူးစဉ် က $30 Million သာ ကုန်ကျခဲ့ပေမယ့် Box Office မှာတော့ $133.9 Million ပြန်ရရှိခဲ့ပြီး IMDB 6.1/10 ရရှိခဲ့ပါတယ် …
ရရှိခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေက သိပ်အကောင်းလွန်တာ တော့ မဟုတ်ပေမယ့် (Pokémon The First Movie ရဲ့ Result ကိုလဲ မကျော်နိုင်ခဲ့ပါဖူး) ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပြောရရင် တော့ ဒီကားက Fav No.1 ကားပါ … အခု Review ကိုတော့ ကျွန်တော် နာရူကာမီ ရိုတွန် မှ ရေးသားပေးထားပါတယ် …
ဒါဆို ~ ဆက်လက် ကြည့်ရှူ ပေးကြပါဦးနော် …
Ikue Otani Inuko Inuyama Masami Toyoshima Mayumi Iizuka Megumi Hayashibara Rica Matsumoto Satomi Kourogi Shin-ichiro Miki Tomokazu Seki Unsho Ishizuka
Akiko Hiramatsu Aya Hisakawa Chikao Ohtsuka Ikue Otani Inuko Inuyama Katsuyuki Konishi Keiko Han Kotono Mitsuishi Kouichi Yamadera Masami Toyoshima Masatoshi Hamada Mayumi Iizuka Megumi Hayashibara Rica Matsumoto Rikako Aikawa Satomi Kourogi Shin-ichiro Miki Takeshi Kaga Tomokazu Seki Unsho Ishizuka Yumi Touma
Option 1 Mega 1.7gb 1080p